Yangu iPhone Haizodzorere. Heino Iyo Chaiyo Kugadzirisa! - Iphone
iphone kuchaja chiteshi kusashanda iphone 6
isa iphone mune dfu modhi
maitiro ekugadzirisa yakaremara ipad
Uri kuedza kudzorera iPhone yako, asi haisi kushanda. Iwe waisa plug yako iPhone mu iTunes uye watanga yekudzorera maitiro, asi iwe uri kuona mhosho meseji se 'Iyi iPhone haigone kudzoserwa' uye iwe hauzive zvekuita. Muchikamu chino, ini ndichatsanangura nei iPhone yako isingadzoreri uye chaizvo kugadzirisa dambudziko ne iTunes .
Usavhunduka: iyi inyaya yakajairika. Kudzorera ane iPhone erases zvese pairi, uye ndiko kuenda-kugadzirisa kwe iPhone software matambudziko - kunyanya zvakakomba. Saka ngatisvikei pairi!
Apple's Tsigiro Chinyorwa Haichekedze
Peji raApple rekutsigira nezve zvekuita kana yako iPhone isinga dzorere ishoma kwazvo, uye kutaura chokwadi, haina kukwana. Ivo vanopa mazano maviri, uye iwo anoshanda, asi pane zvikonzero zvakawanda nei iPhone isingazodzore ne iTunes . Muchokwadi, iyi nyaya inogona kuteverwa kune ese ma software uye Matambudziko ehurdware - asi zviri nyore kugadzirisa kana iwe ukasvikako nenzira kwayo.
Nekuda kweizvi, ndauya nerondedzero yemhinduro dzinoverengeka dzekugadzirisa iyo iPhone isingazodzorere. Matanho aya anogadzirisa matambudziko ese ehurongwa nesoftware nenzira inonzwisisika, saka unozokwanisa kudzorera yako iPhone zvakare pasina nguva.
Maitiro Ekugadzirisa An iPhone Iyo Isingadzorere
1. Ongorora iTunes Pakombuta Yako
Kutanga kubva, zvakakosha kuve nechokwadi chekuti iTunes yakakwira-pane-nguva pane Mac yako kana PC. Zviri nyore kutarisa! PaMac, tevera nhanho nhatu idzi:
Vhura iTunes pakombuta yako.
Tarisa wakatarisana kuruboshwe-ruoko rweApple barbar kumusoro kwescreen yako wobva wadzvanya iTunes bhatani.
Dzvanya Tarisa Zvekuvandudzwa kubva pamenyu inodonhedza. iTunes inozozozvivandudza kana kukuzivisa iwe kuti kopi yako yeTunes yatove kumusoro-kudhara.
Pakombuta yeWindows, ita zvinotevera:
iyo touchscreen pane yangu iphone haisi kushanda
Kubva paWindows menubar, tinya iyo Batsira bhatani.
Dzvanya Tarisa Zvekuvandudzwa kubva pamenyu inodonhedza. iTunes yeWindows ichave inozvivandudza kana kukuzivisa iwe kuti kopi yako yeTunes yatovandudza.
2.Reboot Yako Computer
Kana yako iTunes yatove kumusoro-ku-kudanho, nhanho inotevera mukugadzirisa yako iPhone ndeyekutangazve komputa yako. PaMac, ingobaya iyo Apple bhatani pakona yekumusoro-kuruboshwe-kona yekona uye tinya Tangazve kubva pazasi pemenyu inodonha. PaPC, tinya pane iyo Kutanga Menyu uye tinya Tangazve.
3. Zvakaoma Reset Yako iPhone Kana Yaiswa Yakaiswa MuComputer
Hatisi kugara tichikurudzira kuomesa patsva iPhone yako, asi inogona kunge iri nhanho inodikanwa kana yako iPhone isingazodzorere. Ita shuwa kuti yako iPhone yakavharirwa mukombuta yako paunenge uchiita yakaoma reset.
Maitiro ekuomesa resetting iPhone zvinoenderana nekuti ndeupi muenzaniso wauinayo:
iPhone 6s, SE, uye mukuru : Panguva imwe chete bata uye bata bhatani repamba uye bhatani remagetsi kusvikira iwe waona logo yeApple ichionekwa pachiratidziro.
iPhone 7 uye iPhone 7 Uyezve : Panguva imwe chete bata uye bata bhatani remagetsi uye vhoriyamu pasi bhatani. Sunungura mabhatani ese ari maviri apo Apple logo inowanikwa pachiratidziri.
iPhone 8 uye nyowani : Kurumidza kudzvanya uye kusunungura vhoriyamu kumusoro bhatani, wobva wakurumidza kudzvanya uye kuburitsa vhoriyamu pasi bhatani, wobva wadzvanya wobata padivi bhatani. Sunungura bhatani rerutivi kana Apple logo yaonekwa.
4. Edza Yakasiyana Mheni / USB Cable
Kazhinji, iyo iPhone haidzorere nekuti yakaputsika kana imwe mhosho Mheni tambo. Edza kushandisa rakasiyana Mheni tambo, kana kukwereta imwe kubva kushamwari.
Pamusoro pezvo, tambo dzechitatu-bato dziri kwete MFi-yakasimbiswa neApple zvinogona kukonzera kudzoreredza matambudziko. MFi-yakasimbiswa zvinoreva kuti Apple yakaedza tambo kuti ienderane nematanho ayo uye kuti 'yakaitirwa iPhone.' Kana iwe uri kushandisa yechitatu-bato tambo iyo isiri MFi-yakasimbiswa, ini ndinokurudzira zvikuru kutenga a yemhando yepamusoro, MFi-yakasimbiswa mheni tambo yakagadzirwa neAmazon - iri 6 tsoka refu uye isingasviki hafu yemutengo weApple's!
5. Shandisa Yakasiyana USB Port Kana Computer
Zvinetso neiyo USB chiteshi pakombuta yako zvinogona kukonzera iyo yekudzoreredza maitiro kutadza, kunyangwe kana iyo chete chiteshi ichishanda nemamwe maturusi. Iyo iPhone haizodzosere kana imwe yako USB zviteshi yakakuvara kana isingapi simba rakaringana kubhadharisa chako kifaa mukati meyese kudzoreredza maitiro. Uine izvi mupfungwa, gara uchiedza kushandisa rakasiyana USB chiteshi kudzorera yako iPhone usati waenderera kune inotevera nhanho.
Inguva yekuyedza DFU kudzoreredza kana, mushure mekuyedza nyowani USB chiteshi uye Mheni tambo, yako iPhone haisati ichadzorera. Iyi ndiyo yakasarudzika mhando yekudzoreredza inojekesa yako iPhone's Hardware uye software marongero, ichipa yako iPhone rakachena zvachose slate. Kazhinji DFU kudzoreredza ichaita kuti iwe udzore maPhones ari kusangana nesoftware zvinodzivirira zvakajairika kudzoreredza. Tevera yedu DFU dzorera gwara pano.
7. Kana Zvese Zvimwe Zvikatadza: Sarudzo dzekugadzirisa yako iPhone
Kana iPhone yako ichiri kusadzorera, pane mukana wekuti yako iPhone inoda kutumirwa mukati kuti igadziriswe. Neraki, izvi hazvifanirwe kunge zvichidhura kana kutora nguva.
Kana iwe ukafunga kuenda kuApple Store kuti ubatsirwe, ita chokwadi cheku ita musangano kuGenius Bar kutanga kuti usazopedzisira wamirira mumutsara wakareba kwazvo. Kana iwe uchitsvaga imwe-isingadhuri nzira, Pulse achatumira nyanzvi inosimbiswa kwauri kugadzirisa yako iPhone mune mashoma semaminetsi makumi matanhatu, uye ivo vanopa warandi yeupenyu pabasa ravo.
Munyaya ino, iwe wakadzidza maitiro ekugadzirisa iyo iPhone isingazodzorere, uye kana ukambove nedambudziko zvakare, iwe unobva waziva chaizvo zvekuita. Ndinovimba ichi chinyorwa chakakubatsira iwe kugadzirisa yako iPhone, uye tizivise isu kana yakaita muchikamu chemashoko pazasi!